Dherer intee le'eg ayaa loo baahan yahay TV-ga? - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Dherer intee le'eg ayaa loo baahan yahay TV-ga?
Waxaan ku haynaa jaantusyo cabbir ah dhammaan bogagga wax soo saarka, laakiin wali waxaa nala weydiinayaa inaan xaqiijino cabirka saxda ah tobaneeyo jeer maalintii. Tan macnaheedu waxa weeye in dadku xaqiiqdii hubin waayaan in "sharciyadayada" ay khuseeyaan TV-yada ay leeyihiin, iyo inay nalalka dhigayaan dhamaan dhinacyada ay soo bandhigaan, ama 3 dhinac oo keliya.
Intee dhererkeedu yahay MediaLight (ama LX1) si aad u hesho waxay kuxirantahay haddii aad rabto laydhadhka 3 dhinac ee muujinta ah (ka dhaafida hoose) ama 4 dhinac Labaduba si siman ayey waxtar u leeyihiin, laakiin waxaa jira waqtiyo aad rabto inaad ka dhaafto gunta.
Guud ahaan, waa inaad nalalka saaraa kaliya 3 dhinac marka aad leedahay mid ka mid ah kuwan soo socda:
Caqabadaha - sida TV-ga istaaga marka aysan jirin meel iftiinka uga gudbo TV-ga hoostiisa. Tusaale kale ayaa ah baarka dhawaaqa ama kahadalka kanaalka xarunta si toos ah uga hooseeya TV-ga (si toos ah macnaheedu waa taabashada oo dhan ilaa iyo dhowr inji oo hoose).
Jahwareerka - sida fiilooyin jajaban ama waxyaabo farabadan oo ka hooseeya TV-ga (sanduuqyada sare, fijaannada, sawirrada qaabeeya, iwm). Aragti la'aan, maskax la'aan!
BADIYEY - Haddii TV-ga uu saaran yahay miiska dhalada ama si toos ah korka (4-5 inji dhexdooda) barxad dhawaq dhalaalaysa ama kuhadalka kanaalka xarunta, waxay u badan tahay inuu dhalaalayo. Waxaa ka fiican in laga dhaafo laydhka.
4 dhinac ayaa ugu fiican marka TV-ga uu saaran yahay derbi korkiisa, laakiin runtii kuma khaldami kartid 3 dhinac. Haddii midkoodna kor ku xusan uusan quseynin, waxaad u maleyneysaa inaad nalalka ku dhejin kartid 4 dhinac. Xaaladda ugu xun, ka go'i salka.
Haddaba, sideen ku ogaan karnaa dhererka saxda ah?
Waxaad ka heli doontaa shaxanka hoose, laakiin si aad u ogaato inta ay xariggu u baahan yahay inuu ahaado nalal ku yaal 4 dhinac ee muujintaada, kaliya qaado cabbirka muuqaalkaaga 16: 9 (inta badan shaashadaha waa 16: 9) inji oo u qaybi 15. Isku soo koob ilaa cabbirka weyn ee xiga.
Marka, isku soo duub oo waxaad arkeysaa inaad u baahan tahay xarig * 5 mitir * ah.
3 dhinac ee nalalka, qaado cabbirka shaashadaada oo u qaybi 23. Isku soo wada duuboo!
Marka, isku soo koob ilaa 3 mitir xarig ah.
Talooyinkani waxay u malaynayaan in laydhadhku ku rakiban yihiin 2 inji oo laga doorto cidhifka muujinta.
Tiirka seddexaad ee shaxda cabirka hoose wuxuu sababayaa jahwareer, aniguna waxaan ku jiraa xayndaabka joojinta safka seddexaad dartiis fudeyd, inkasta oo ay tahay mid lagu shaqeyn karo xaalado badan oo TV-ga ama kormeeraha uu taaganyahay iyo derbiga korkiisa .
Hal meel meesha "soo bandhigida taagan" rakibistu sifiican uga shaqeyso ayaa ah kuwa ugu yar ee kormeerayaasha kumbiyuutarka ah ilaa 32 ", in kastoo aan isticmaalay 1 mitir madoobaad 55" Sony Bravia ah oo aan awood u yeeshay inaan dhigno heerar tixraac ah oo ka soo horjeedka iftiinka derbiga cawlan.
Marka, Mk2 Eclipse 1 mitir ayaa weli ah talo soo jeedinta kombiyuutarka in kasta oo aysan caadi ahaan ku filneyn in lagu wareego 3 dhinac haddii la dhigo geeska. Haddii aad la yaaban tahay sababta, si xor ah iila soo dir email. Waxaa jira sababo fara badan oo laga yaabo inay xoogaa aad u faahfaahsan yihiin qoraalkan.
Si kastaba ha noqotee, sidaad arki karto, Eclipse-ka 'MediaLight Mk2 Eclipse' inta badan kuma filna inuu ku wareego 3 dhinac waxayna umuuqataa mid fiican, jilicsan oo xitaa hareeraysan.
"Muujinta taagan" rakibida-U rakibidda, waxaan dhigeynaa nalalka meel ka sii fog geeska mana hayno dherer nagu filan oo aan ku wareejin karno 3 dhinac oo muujinta ah haddii aan joogno 3 inji oo lagu taliyay.
Tusaale ahaan, laga yaabee inaan dhigeyno 2 mitir oo xarig ah 65 "bandhig. Si aan u wareegno geesaha, waxaan u baahanahay 2.8 mitir. Marka, sidee ayaan ugu wareegeynaa 3 dhinac oo leh 2 mitir oo keliya? Waxaan si dheeri ah u dhigeynaa MediaLight laga soo bilaabo geeska bandhigga.
Dadka qaarkii waxay doorbidaan tan maxaa yeelay waxay keenaysaa halo dabacsan oo baahsan, taas oo aad ugu habboon wixii aad ku arki laheyd MediaLight Single Strip oo duug ah maalintii (hal xaraf oo siman oo dhinaca dambe ee TV-ga ah), ama ifaya-qurxin Fiican-Lume. Xaaladahaas oo kale, laydhadhku way ka sii fog yihiin geeska, markaa waxaad ku socotaa heer dhalaal sare si aad ugala xisaabtanto iftiinka iftiinka ka socda xarunta TV-ga. Ka feker sida iftiinku u egyahay mid sii yaraanaya inta aad ka helayso bartamaha milicsiga. Haddii ay tahay xarun-dhimasho, waxaa jiri doona dhicitaan badan kahor inta uusan gaarin cirifka.
Dadka qaarkiis sidoo kale waxay door bidaan habkan maxaa yeelay waxay ku kici kartaa wax badan ka yar. Hadda waxaan bixinnaa ikhtiyaar qiimo jaban, LX1, iyo farqiga u dhexeeya 1m iyo 2m kaliya waa $ 5 oo ka soo horjeedda $ 20, waxaan dareemayaa in qaabkani aanu ahayn mid waxtar leh.
Sidoo kale, LX1 kuma jiraan xadhig dheeri ah oo ah .5m, markaa waxaa jira xaalado qaarkood oo aadan awoodi karin inaad ku dhejiso xarig ka gaaban TV-ga USB-ga TV-ga (xarigga waxaa laga yaabaa inuusan gaarin cidhifka TV-ga halka ugu badan, laakiin maahan oo dhan, soo saarayaasha ayaa dhiga USB-ga).
Haddii aad u dhexeyso cabbirka waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho xariiq yar oo ka yar. 3.11 waa inta udhaxeysa 3 iyo 4. 3.33 maahan. Markii shaki ku jiro, isku soo duub maxaa yeelay marwalba waad jari kartaa wixii siyaado ah ee MediaLight ama LX1.
Wixii * kormeerayaasha kumbuyuutarka ee aan ku xirneyn derbiga dushiisa *, waxaad isticmaali kartaa xarig 1 mitir ah. Jaantusku wuxuu ku tusayaa waxa taasi u ekaan lahayd.
** Mararka qaar TV-yada waxay ku leeyihiin "hump" dhawaaq hoose. Tani waxay caan ku tahay waxyaabo badan oo khafiif ah oo OLED ah oo lagu dhejiyo qalabka elektarooniga iyo kuwa ku hadla. Weli waad ku ordi kartaa laydhka salka hoose haddii nalku taabanayo gidaarka mooyee. Fikrad ahaan, waxaad dooneysaa qiyaastii 1-2 "bannaanka darbiga. Qaybta hoose ee dhumuc weyn uma muuqan doonto mid dhalaalaya oo" halo "ayaa cidhiidhsanaysa xagga hoose, laakiin uma muuqato mid xun.
Waxaan haynaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan rakibida nalalka dusha sare ee qashin-qubka rakibaadda .
Next article Miyuusan leben ama midab midab leh “burburin” nalalka eexda saxda ah?